Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်)
Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Thalidomide ကို လက်ပရိုဆီ ရောဂါ (အနူရောဂါ)ဟုလူသိများသည့် Hansen’s disease ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အရေပြားပြဿနာများကို ကာကွယ်ကုသရာ၌ အသုံးပြုသည်။ Thalidomide ကို အခြားသော ဆေးများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကင်ဆာရောဂါတမျိုးဖြစ်သော Multiple myeloma ကို ကုသရာတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။ Thalidomide သည် ခုခံအားစနစ်ကို ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သော ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Hansen’s disease တွင် Thalidomide သည် နီရဲရောင်ရမ်းခြင်းများကို သက်သာစေခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေသည်။ ထို့အပြင် Thalidomide သည် ကင်ဆာဆဲလ်များကို အစာအာဟာရပေးသည့် သွေးကြောများကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။
အခြားအသုံးပြုမှုများ။ ။ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် အသုံးပြုပုံများသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအညွှန်းတွင်မပါဝင်သော်လည်း သင့်ဆရာဝန်က ညွန်းဆိုသော အသုံးပြုမှု အခြေအနေများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် ရောဂါအနေအထားများ အတွက် Thalidomide ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် ရှိမှသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
—>Thalidomide ကို ကင်ဆာနှင့် HIV တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အချို့အခြေအနေများကို ကုသရာတွင်လည်း အသုံးပြုကောင်းပြုနိုင်သည်။
Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Thalidomide ကို ညအိပ်ယာဝင်ချိန်၌ တနေ့တကြိမ် (ညစာနှင့် အနည်းဆုံး တနာရီ ခြားရမည်) သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်နိုင်သည်။ ဆေးကို ရေဖြင့် သေချာစွာ မြိုချပါ။
သောက်ရမည့် ဆေးအချိုးအစားပမာဏသည် ရောဂါအခြေအနေ နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဆေးပမာဏ သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေကို မိမိသဘောဖြင့် မတိုးပါနှင့်။ ထိုသို့ တိုးလိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်ရောဂါဝေဒနာမှာ ပို၍မြန်မြန်သက်သာလာမည် မဟုတ်ဘဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသာ ပိုလာမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးတောင့်များကို သောက်ခါနီးမှ ဖောက်ပါ။ ဆေးတောင့်အခွံကို မဖွင့်ပါနှင့်၊ မချိုးပစ်ပါနှင့်၊ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ မကိုင်ပါနှင့်။ အကယ်၍ ဆေးတောင့်ထဲမှ ဆေးမှုန့်များ သင့်လက်ကိုပေသွားပါက ထိုပေသည့်နေရာကို ဆပ်ပြာနှင့် ရေကို အသုံးပြု၍ စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ။
Thalidomide သည် အရေပြားမှတဆင့် ခန္တာကိုယ်ထဲ စုပ်ယူခြင်းခံရနိုင်သည့်အပြင် အဆုတ်မှတဆင့်လည်း ခန္တာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်ကာ သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေနိုင်သဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အလားအလာရှိသူ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ဤဆေးကို မကိုင်တွယ်သင့်သည့်အပြင် ဆေးတောင့်ပေါက်ပြဲရာမှ ထွက်ရှိလာသော ဆေးမှုန့်များကိုလည်း မရှုမိစေရန် အထူးအရေးကြီးလှပါသည်။ ဆေးကို ကိုင်တွယ်ပြီးလျှင် မည်သူမဆို လက်က သေချာစွာ စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောပစ်ရမည်။ Thalidomide သည် ဆီးကဲ့သို့သော ခန္တာကိုယ်မှ ထွက်ရှိသည့် အရည်များထဲတွင် ပါဝင်လာမည်ဖြစ်၍ Thalidomide သောက်နေသူ၏ ခန္တာကိုယ်မှ ထွက်ရှိသော မည်သည့်အရည်ကို မဆို မကိုင်တွယ်မိရန် အလွန် အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် Thalidomide သောက်နေသူ၏ ခန္တာကိုယ်မှ ထွက်သော အရည်များကို ကိုင်တွယ်မည်ဆိုလျှင် (ဥပမာ။ ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ချိန်) လက်အိတ်ဝတ်ထားရန် လိုအပ်သည်။
ဆေးအာနိသင် အထက်မြက်ဆုံးဖြစ်စေရန် ဆေးကို မှန်မှန်သောက်ပါ။ နေ့တနေ့၏ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တခုခုတွင် ပုံသေသောက်မည်ဆိုပါက ပို၍ မှတ်မိမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သင်သည် Hansen’s disease အတွက် Thalidomide ဆေးကို သောက်နေသူဆိုလျှင် ဆေးကိုရုတ်တရက် ဖြတ်လိုက်ပါက အရေပြားအခြေအနေများမှာ ပိုဆိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးကို ရုတ်တရက် မရပ်လိုက်ဘဲ တဖြည်းဖြည်းစီ လျှော့ချသွားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးသောက်ပြီး ၂ပတ်အကြာထိ မသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Thalidomide ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Thalidomide ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Thalidomide ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Thalidomide ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Thalidomide ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ Thalidomide ဆေးသောက်သုံးမည်ဆိုလျင် အောက်ပါအခြေအနေများကို သတိထားသင့်သည်။
Thalidomide ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမက အစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကို တာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါ အကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
၁၂နှစ်အောက် ကလေးငယ်များတွင် Thalidomide ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လုံလောက်စွာ သုတေသနပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဆေး၏ အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။
လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် Thalidomide ၏ အသုံးဝင်မှု ဆေးစွမ်းကို ကန့်သတ်စေမည့် ပြဿနာမရှိသေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါကThalidomide သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
• မေ့လဲသွားတော့မည်ဟု ခံစားရခြင်း၊နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊အသက်ရှုနှေးလာခြင်း။
• ချမ်းတုန်ဖျားခြင်း၊တုပ်ကွေးကွေးသကဲ့သို့ ကိုယ်လက်များနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊လည်ချောင်းနာခြင်း၊ သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း၊သွေးထွက်လွယ်ခြင်း။
• ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှုမဝခြင်း၊ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်း။
• လက်မောင်း၊ပေါင်၊ခြေသလုံးကြွက်သားများ နာကျင်ရောင်ရမ်းခြင်း။
• အရေပြားတွင် အနီရောင်အရည်ကြည်ဖုများ ထခြင်း။
• အရေပြားတွင် ဖောင်းနေသော အနီရောင် အစက်များ ပေါ်လာခြင်း (အထူးသဖြင့် အဖျား၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊သတိလစ်ခြင်းတို့နှင့် တွဲလျှင်)
• ထုံခြင်း၊နာခြင်း၊မီးလောင်သလိုပူပြီးနာခြင်း၊ပုရွတ်ဆိတ်များ ပြေးနေသလို ရွစိရွစိ ခံစားရခြင်း။
• ပူပန်ကြောင့်ကြများခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ခြေလက်များ ကတုန်ကရင် ဖြစ်ခြင်း။
• အရိုးများနာခြင်း၊ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Thalidomide ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် Thalidomide နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော အခြေအနေများတွင်မူ သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Thalidomide က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Thalidomide ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• HIV ပိုးရှိခြင်း
• သွေးဖြူဥတစ်မျိုး နည်းခြင်း
• အတက် ရာဇဝင်ရှိခြင်း
• လေဖြတ်ဖူးခြင်း …………………………….. ရောဂါအခြေအနေများကို ပိုဆိုးစေသဖြင့် သတိထားပြီး သုံးစွဲရမည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဦးစွာ ၁၀၀-၃၀၀မီလီဂရမ် ညအိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် တနေ့လျှင် တကြိမ် ရေများများဖြင့် သောက်ပါ (ညစာနှင့် အနည်းဆုံး ၁ နာရီခွာရမည်)။ ကိုယ်အလေးချိန် ၅၀ကီလိုထက် နည်းသော လူနာများတွင် ဆေးပမာဏ နည်းနည်းမှ စနိုင်သည်။
ဆိုးရွားသော အရေပြားရောဂါ (Severe cutaneout ENL reaction) သို့မဟုတ် နဂိုမူလကတည်းက ဆေးအချိုးအစားခပ်များများလို သော လူနာများအတွက်
အများဆုံး 400mg/dayကို ညအိပ်ယာဝင်ခါနီး တနေ့လျင် တကြိမ် သို့မဟုတ် သင့်လျော်သလို ခွဲပြီး ရေများများနှင့် သောက်ပါ(အစာနှင့် အနည်းဆုံး တနာရီခြားပါ)။
Multiple myeloma ကင်ဆာရောဂါအတွက်
200 မီလီဂရမ် ညအိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် တနေ့လျှင် တကြိမ် ရေများများဖြင့် သောက်ပါ (ညစာနှင့် အနည်းဆုံး ၁ နာရီခွာရမည်)။
ကလေးတွေအတွက် Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
နှစ် နှင့်အထက် :
Thalidomide (သာလီဒိုမိုက်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Thalidomide ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတောင့် : ၁၀၀၊ ၁၅၀၊ ၂၀၀ မီလီဂရမ်
Thalidomide ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများနှင့် ကုသမှုများကို မပြုလုပ်ပေးပါ
Thalidomide https://www.drugs.com/cdi/thalidomide.html. Accessed July 15, 2016.
Thalidomide https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699032.html. Accessed July 15, 2016.
Thalidomide http://www.webmd.com/drugs/2/drug-16389/thalidomide-oral/details. Accessed July 15, 2016.